Hogaamiyaasha maamul goboleedka woqooyiga Tigray ee Ethiopia ayaa diiday sheegashada dowlada ee ah in ciidamada federaalku ay ku hareeraysan yihiin caasimada gobolka ee Mekelle, iyadoo ra’iisul wasaare Abiy Ahmed uu siinayay kooxda Tigray People’s Liberation Front (TPLF) in ilaa Arbacada ay is ku soo dhiibaan.
Hoggaamiyeyaasha TPLF ayaa Talaadadii sheegay in shacabka Tigreegu ay “diyaar u yihiin in ay dhintaan” iyagoo difaacaya dhulkooda waxayna sheegeen in ay “gabi ahaanba burburiyeen” qaybta federaalka ee makaanikada ee ciidanka qaybta 21aad ee dowladda Faderaalka Itoobiya.
Gelinka dambe ee Talaadada maanta, Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ayaa la filayaa inuu ka hadlo qalalaasaha, kaasoo ku qasbay tobanaan kun oo rayid Itoobiyaan ah in ay magangelyo u doontaan dalka ay deriska yihiin ee Suudaan.
Laakiin falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in ciidamada dowlada hadii ay qabsadaan caasimada Tigreega in laga yaabo in aysan soo afjarin dagaalada ka socda mid kamid ah gobolada ugu saboolsan wadanka labaad ee ugu dadka badan Africa.
“Isku dhacu wuu is beddeli karaa waxaana jirta suurta gal cabsi leh oo ay ku xidideyso. Labada dhinacba si aad ah ayey u hubeysan yihiin, tanina waxa ay horseedi kartaa dagaal muddo dheer soconaya oo jabhadeyn ah” ayuu yiri Ahmed Soliman, oo ah cilmi baare ka tirsan xarunta cilmi-baarista ee London, Chatham House oo la hadlay Al Jazeera.
Saameynta iskahorimaadka ayaa sidoo kale suurta gal ka dhigi karta in dagaalku ku sii faafo wadamada deriska ah Itoobiya.
Axadii, Abiy, oo ah hogaamiyaha ugu da’da yar qaaradda Afrika isla markaana sanadkii hore ku guulaystay abaalmarinta Nobel Peace Prize, wuxuu siiyay ciidamada TPLF muddo 72 saacadood ah in ay isdhiibaan ama ay wajahaan guluf militari oo “kama dambeys ah” ku ah Mekelle.
Abiy wuxuu sheegay in hogaamiyaasha TPLF ay ka joogaan “meel aan laga laaban karin”, isagoo ku booriyay “in ay ka faa’iideystaan fursadaan oo ah tii ugu dambeysay” maadaama ciidamada Itoobiya ay sheegeen in ay ku hareeraysan yihiin magaalada caasimadda ah oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 500,000 oo qof.
Soliman wuxuu sheegay in waqtigii ugu dambeeyay ee Abiy uu “la jaan qaadayo ra’iisul wasaaraha iyo sheekada dowladda federaalka ee ah in ay fulinayaan hawlgal sharci fulin ah oo looga saarayo canaasiirta dambiilayaasha ah Tigray”.
“Aakhirka ayaa sidoo kale loogu talagalay in lagu wiiqo taageerada TPLF ee shacabka rayidka ah ee Tigray laguna dhiirigaliyo in ay ka baxaan ama ay taageeraan dawlada federaalka ah”ayuu yiri.
Muddo soddon sano ah, Tigreegu waxa ay xukumayeen isbahaysiga xukuma dalka oo ka kooban afar xisbi qoomiyad-goboleed ilaa Abiy, oo xubin ka ahaa qowmiyadda Oromada, uu xukunka qabtay Abriil 2018.
Intii uu xilka hayay Abiy, TPLF waxa ay ku eedaysay Addis Ababa in ay si cadaalad daro ah u bartilmaameedsato hogaamiyaasha gobolkeeda dacwadaha musuqmaasuqa, iyadoo qaar badan oo kamid ahna laga qaaday xilalka ugu sareeya dowlada.
Sanad ka hor, Abiy wuxuu kala diray isbahaysigii xukumayay wuxuuna abuuray barwaaqo sooran meeshiisii. Kooxda TPLF ayaa diiday in ay kubad ciyaaraan waxayna aadeen wadadooda u gaarka ah iyaga doorasho gaar ah qabsaday.
Bishii Sebtembar, xiisaddu way sii kordhaysay ka dib markii Tigray ay qabsatay doorashadeedii, taasoo ay ka hor timid dowladda federaalka ah oo dib u dhigtay doorashooyinka guud sababo la xiriira cudurka faafa ee coronavirus.
Adisababa waxa ay ku dhawaaqday doorashadii Tigray mid aan sharci ahayn. Jawaabta, Tigray waxa ay sheegtay in aysan aqoonsaneyn wixii intaa kadambeeyay Abiy maamulkiisa “sharci darada ah”, iyada oo ku andacoonaysa in waqtigeedu dhamaaday.
Dowladda dhexe ayaa ka aargoosatay iyadoo dhaqaalaha ka jartay gobolka, iyadoo kooxda TPLF ay sheegtay in tillaabadani “ay lamid tahay ficil dagaal”.
“Abiy wuxuu ka hadlayaa dimuqraadiyadda laakiin wax dan ah kama lahan wax kasta oo dimuqraadiyadda u taagan tahay,” ayuu yiri Solomon Mezgebu, oo ah aqoonyahan ka soo jeeda Tigray, oo la hadlay Al Jazeera.
“Tigray waxa ay federaal ka hirgalisay Itoobiya. Abiy wuxuu ka soo horjeedaa federaalka sidaa darteed wuxuu abaabulay dhammaan ciidamadii dalka si ay u hoos yimaadaan, u burburiyaan una baabi’iyaan dadka ka dambeeya fikradda. ”
Markii xiisaduhu sii kordhayeen, khadadka taleefanka iyo qadka internetka ayaa laga jaray Tigray waxaana hay’adaha gargaarka laga hor istaagay in ay galaan gobolka buuraleyda ah.
Adisababa waxa ay sheegaysaa in duulaanka lagu bartilmaameedsanayo kaliya hogaamiyaasha TPLF, oo aan la bartilmaameedsanin dadka ka soo jeeda gobolka.
“Hawlgallada sharci fulinta, dhammaan tallaabooyinka taxaddarka leh ee lagama maarmaanka ah ayaa la qaaday si loo hubiyo in aan rayidka waxyeello loo geysan,” ayuu Abiy ku yiri hadal uu soo saaray Axaddii.
“Inkasta oo kooxda TPLF ay rabto waxyeelo daran, diyaaradaheena militariga waxa ay aad uga taxadireen in ay waxyeelo ugaystaan ​​dadka shacabka ah, ilaa heer laga joojiyay howlgalada lagu ogaanayay dadka rayidka ah ee ku dhawaa meelaha la bartilmaameedsanayay,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Sidaas oo ay tahay, boqolaal qof, oo ay ku jiraan dad rayid ah, ayaa laga cabsi qabaa in ay ku dhinteen dagaalka saddexda toddobaad soconaya, halka in ka badan 40,000 oo qof ay u gudbeen Suudaan, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Toddobaadkii hore, hay’adda soogalootiga u qaabilsan Qaramada Midoobay ee UNHCR, ayaa sheegtay in 4,000 oo qof ay maalin walba u gudbayaan dalka Suudaan iyaga oo ka baxaya dalka Itoobiya tan iyo intii ay colaaddu bilaabatay
Isniintii, kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International waxa ay ugu baaqday dowladda Itoobiya in ay ilaaliso dadka rayidka ah maadaama ay duulaan ku yihiin magaalo hogaamiyayaasha gobolka ee Mekelle.
“Colaada ka jirta gobolka Tigreega ayaa durba galaafatay boqolaal rayid ah, waxaa ku dhaawacmay dad aad u tiro badan, kumanaan kalena waxa ay ku qasbeen xeryo qaxooti oo kuyaala dalka ay deriska yihiin ee Sudan,” ayuu yiri Deprose Muchena, oo ah agaasimaha Amnesty International ee bariga iyo koonfurta Afrika.
“Taliyeyaasha ciidamada qaranka Itoobiya iyo kooxda TPLF waa in ay qaadaan tilaabooyin firfircoon oo lagu ilaalinayo dadka shacabka ah inta lagu jiro dagaal kasta, oo ay kujirto iyadoo la qaadanayo dhammaan taxaddarrada suurtagalka ah si looga fogaado waxyeellada shacabka iyo kaabayaasha rayidka ah iyo in laga fogaado in la helo xarumaha militariga iyo askarta u dhow meelaha rayidka ah,” Muchena ayaa yiri.
Dhanka kale, Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay goor dambe oo Isniintii ah ayuu sheegay in ay qabanayaan kulankoodii ugu horreeyay ee xaaladda Itoobiya, iyadoo xukuumadda Abiy ay uga digtay hoggaamiyeyaasha TPLF ina y wajihi doonaan eedeymo ah khiyaano qaran, “argagixiso” iyo in ay weerarayaan dowlad deris ah.
Aqoonyahan Tigray ah Soloman wuxuu sheegay in ciidamada Abiy laga yaabo in ay kudhamaadaan “qabsashada dhamaan magaalooyinka iyo tuulooyinka” ee Tigray, “laakiin dadka Tigray waligood lama hoosgeyn doono”.
“Taariikhda ayaa noo sheegaysa in taasi aysan dhici doonin,” ayuu u sheegay Al Jazeera. “Dunida, iyo gaar ahaan Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay, waxay u baahan yihiin inay dalbadaan in dagaalka la joojiyo maxaa yeelay ma jiri doono guuleyste, kaliya waa kuwa guuleysta.”
Laurent Gbagbo completed the formalities to obtain a diplomatic passport